Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 01:07
37 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 00:55 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 01:07 (hanova) (esory)
Ny [[Alahamady]] no volana sy vintana voalohany amin'ny fanandroana. [[Renivintana]] ny Alahamady. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe االحمل / ''Al-Hamal'' ("ondrilahy") ny teny hoe ''Alahamady''. Ny zoro avaratra-atsinana amin'ny trano no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Ny faritra na tanàna ao avararaavaratra-atsinanan'ny tanàna iray dia atao hoe "Alahamadin-tany" ho an'io tanàna faharoa io.
Ny [[Adimizana]] no vintana sy volana fahafito. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اميزان / ''Al-Mizan'' ("mizana") ny hoe ''Adimizana.'' [[Renivintana]] ny Adimizana. Ny zoron-trano atsimo-andrefana no toerana omena azy. Ny Adimizana dia mifandratra amin'ny Alahamady sady mitanila sy miarina eo amin'ny Alohotsy sy ny Adaoro. Mitrotro ny [[Alakarabo]] sy mibaby ny [[Asombola]] ny Adimizana. Mifandratra amin'ny [[Alahamady]] sady mitanila sy miarina eo amin'ny [[Alohotsy]] sy ny [[Adaoro]] ny Adimizana. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adimizana, dia vava Adimizana (vavan'Adimizana) sy ny vonto AdimizanAdimizana ''sy ny vonto(na vonton'Adimizana) ary ny vody Adimizana.' (na vodin'Adimizana).
Ny [[Alakarabo]] no vintana sy volana fahavalo. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اعقرب / ''Al-Akrab'' ("maingoka") ny hoe ''Alakarabo.'' Zanabintana ny Alakarabo. Ny tapany atsimo amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Miarina eo amin'ny Alahamady sady mifandratra amin'ny Adaoro ny vintana Alakarabo. Ny renivintana Adimizana no mitrotro azy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakarabo, dia ny vava Alakarabo (na vavan'Alakarabo) sy ny vody AsombolaAlakarabo (na vodin'Alakarabo).
Ny [[Alakaosy]] dia vintana sy volana fahasivy ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اقوس / ''Al-Kaus'' ("mpitifitra tsipika") ny hoe ''Alakaosy.'' [[Zanabintana]] ny Alakaosy. Ny tapany avaratra amin'ny rindrin-trano andrefana no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny Adizaoza ny Alakaosy sady miarina sy miandriana eo amin'ny Asorotany ny Alakaosy. Baben'ny renivintana Adijady ny Alakaosy. Mitondra tonon'andro roa ny Alakaosy, dia ny vava Alakaosy (na vavan'Alakaosy) sy ny vody Alakaosy (na vodin'Alakaosy).
Atao hoe ''Alakaosibe'' ny vava Alakaosy (na vavan'Alakaosy) ao amin'ny volana Alakaosy. Amin'ny vava Alakaosy amin'ny volana Alakaosy no andro fanandratana ody sy sampy. Manao sorona ny mpitahiry ody mahery sy sampy. Ny vehivavy mbola tokony hiteraka dia tsy mihinan-kanina amin'ny vava Alakaosy mba tsy hiteraka Alakaosy. Ny zaza teraka vava Alakaosy dia hanoto ray aman-dreny, ka ahohoka ho faty na alam-bintana mba ho tratra antitra sy ho lehibe ary ho mpanan-karena.
Vintana sy volana fahafolo ny [[Adijady]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe اجدي / ''Al-Djadi'' ("osilahy") ny hoe ''Adijady.'' [[Renivintana]] ny Adijady. Ny zoron-trano avaratra-andrefana no toerana omena azy. Mitrotro ny Adalo sy mibaby ny Alakaosy ny Adijady. Mifandratra amin'ny Asorotany sad mitanila sy miarina eo amin'ny Alahasaty sy ny Adizaoza ny Adijady. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro telo ny Adijady, dia vava Adijady (vavan'Adijady) sy ny vonto Adijady (na vonton'Adijady) ary ny vody Adijady (na vodin'Adijady).
Vintana sy volana faharaika ambin'ny folo ny [[Adalo]]. Avy amin'ny anaran'antokon-kintana amin'ny teny arabo hoe ادلو / ''Al-Dalu'' ("mpandraraka rano") ny hoe ''Adalo.'' [[Zanabintana]] ny Adalo. Ny tapany andrefana amin'ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Mifandratra amin'ny [[Alahasaty]] sy miarina eo amin'ny [[Asorotany|Asorontany]] ny vintana Adalolo. Trotroin'ny renivintana Adijady ny zanabintana Adalo. Ao amin'ny fitetezana andro dia mitondra tonon'andro roa ny Adalo, dia ny vava Adalo (na vavan'Adalo)sy ny vody Adalo (na vodin'Adalo).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974857"